WARARKA – Codkasoomaalida.com
Category: WARARKA	Midab aan la doorin iyo qurux hablihii hore u daa!	Quruxdii dumarkii Soomaaliyeed ee qarniyo hore iyo siday u ilaalin jireen wajigooda, qiimaha uu lahaa iyo caafimadka uu haystay.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, WARARKA	Fowsiya Xaaji Aadan oo mar kale loo doortay Xildhibaannimo	Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo horay u soo noqotay ra’iiasal wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arimaha dibada Soomaaliya, ayaa maanta ku soo baxday doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobollada W/qooyi oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Author adminPosted on January 1, 2017Categories Featured, WARARKA	Baarlamaanka oo diiday miisaaniyad xukuumadda u gudbisay	Kalfadhiga Koowaad Kulankiisa Labaad ee Wadajir labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo ay Maanta ku yeesheen Xarunta Golaha Shacabka ee Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleyn arrimo dhowr ah.
Xildhibaannada Baarlamaanka ayaa ka dooday miisaaniyad ay xukuumadda u soo gudbisay, taasi oo ay xildhibaannada qaarkood ku fasireen mid hoos-gelis ah oo la doonayo in hantida dalka lagu dhaco.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo si kulul uga dooday miisaaniyadda xukuumadda ayaa waxay dib u celiyeen Miisaaniyadda Saddexda bilood ee Janaayo, Fabraayo iyo Maarso oo ay soo Gudbisay Wasaarada Maaliyada Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa sheegay in aysan sharci ahayn Miisaaniyada loo soo gudbiyay.
135 ka mid ah Xildhibaanadii soo xaadiray ayaa diiday in la ansixiyo Miisaaniyada Saddex bilood ee Janaayo, Fabraayo iyo Maarso oo ay soo Gudbisay Wasaarada Maaliyada Soomaaliya sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha KMG ee Golaha Shacabka Cusmaan Cilmi Boqore.
Ugu dambeyn Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa Maalinta berito ah ku ballamay in ay ka doodaan talooyina ay ku darsadaan dhisidda Guddiga doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo Madaxweynaha.
Author adminPosted on December 31, 2016December 31, 2016Categories Featured, WARARKA, WAREYSIYO	Erayada qaldan ee maalin kasta lagu isticmaalo warbaahinta –VIDEO	Axmed Faarax Cali Idaajaa ayaa ka warramay erayo badan oo qalad ah oo maalin kasta oo warbaahinta lagu isticmaalo, kuwaasi oo sida uu sheegay sii dili kara Afka Soomaaliga. Idaajaa ayaa sharraxaya kuwa ay yihiin erayadaas.
Author adminPosted on December 25, 2016Categories MUUQAAL, WARARKA	Posts navigation